5 साइट्याटिक स्नायु दुखाई राहत बारेमा सुझावहरू
समय: 2019-06-04 दृश्य:
अधिक र अधिक व्यक्ति साइटिकामा पीडित छन्. वास्तविक, साइटिका भनेको आर्थोपेडिक रोगको एक विशिष्ट क्लिनिकल लक्षण हो, तर एउटा रोग होईन. फोल्वि .्ग रोगहरू साइटिकाका मुख्य कारणहरू हुन्.
1. काठ मेरुदण्ड स्टेनोसिस
काठको मेरुदण्डको स्टेनोसिसको कारण हुने कटिप्रदेश प्रायः मध्यम आयु वर्गका पुरुषहरूमा हुन्छ. प्रारम्भिक चरणमा, यो संगै जान्छ "अन्तर्विरूद्ध claudication".तल्लो पछाडि दुखाई बढाइएको छ, लामो समय पैदल पछि. तर लक्षणहरू आराम गरे पछि आराम वा हराउनेछ.
2. काठ हर्निएटेड डिस्क
काठको डिस्क हर्निनेसन भएका व्यक्तिहरूमा अक्सर दोहोरिने कम पीठ दुख्ने इतिहास वा भारी शारीरिक श्रमको इतिहास हुन्छ. यो अक्सर काठको चोटपटक वा झुकाउने काम पछि गम्भिर हुन्छ. लक्षण र साइटिकाका लक्षणहरूको अतिरिक्त, यो काठ मांसपेशियों को ऐंठन संगै हुनेछ, सीमित लम्बर गति, ets. इन्टरभेर्टेब्रल डिस्क हर्निएटेड भागहरूमा स्पष्ट कोमलता र विकिरण दुखाइ हुन सक्छ।
3. लुम्बोसक्रल रेडिकुलाइटिस
Lumbosacral रेडिकुलाइटिस सामान्यतया एक तीव्र शुरुआत संग शुरू हुन्छ. र क्षतिको हदसम्म प्राय साइट्याटिक स्नायुको क्षेत्र भन्दा बढी छ. यो कमजोरीको रूपमा प्रकट हुन्छ, तल्लो अंगहरूमा दुखाइ र हल्का मांसपेशी शोष. साथै, अचिलिस टेंडन रिफ्लेक्स प्रायजसो कमजोर हुन्छ र हराउँछ.
4. मेरुदण्ड आघात,ट्यूमर र श्रोणि रोग,आदि.
मेरुदण्ड आघात, ट्यूमर र पेल्विक विकारहरू, आदि. साइटिका को कारण पनि हुन सक्छ।
माथिका सबै कारणले कटिबिन्दु निम्त्याउन सक्छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण काठ रोग हो.
छन्5साइटिका नर्भ दुखाइ कम गर्ने सल्लाहहरू:
1. होभरिंग एडी
पुस्तकहरू जमीनमा राख्नुहोस्, cm सेमी उचाईको वरिपरि। तब पुस्तकको टुप्पोमा एडी हावामा घुमाउँदै. दृढता समय तपाईं सहन गर्न सक्नुहुने समयमा निर्भर गर्दछ.
2.समतल झूट,फिलालाई समातेर बाछोलाई उठाइरहेछ
एक खुट्टा फ्लैट संग फ्लैट झूट, हातहरूले फिलाको प्रभावित पक्ष फिक्स गर्यो. पछाडि खुट्टाको मांसपेशीहरू बिस्तारै कडा हुँदै वा दुखाइको भावना नभएसम्म घुँडाको जोड़ बिस्तारै विस्तार गर्नुहोस्. रहनुहोस् 10 सेकेन्ड र त्यसपछि आराम गर्नुहोस्, पनि5गर्न 10 पटक.
3.समतल झूट,खुट्टा उचाल्ने
सुपिन, तल्लो चराहरू र सक्रिय अंगहरू. जब फिलाको पछाडि तनाव वा पीडा हुन्छ, रोक्नुहोस्5गर्न 10 सेकेन्ड. पनि 5-10 पटक.
तातो कम्प्रेसले मांसपेशीहरूलाई आराम दिन र पीडा कम गर्न सक्छ.
अल्ट्रासोनिक, शोर-वेभ र अन्य शारीरिक उपचार विधि साइटिकाका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ.
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, त्यहाँ साइटिकाका लागि धेरै कारणहरू छन्। यदि साइटिका भनेको काठको मेरुदण्डको स्टेनोसिस वा काठ हर्निएटेड डिस्कको कारणले हो।, कृपया तपाइँको डाक्टरसँग समय मा मद्दत माग्नुहोस् र अन्धाधुन्ध व्यायाम नगर्नुहोस्.
अघिल्लोमोटोपनाले प्रजनन क्षमतालाई असर गर्दछ?
अर्को कुनै पनि